Caqabado ka dhashay isku shaandheyn lagu sameeyay shaqaalaha xafiiska ra’iisul wasaaraha – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Caqabado ka dhashay isku shaandheyn lagu sameeyay shaqaalaha xafiiska ra’iisul wasaaraha
Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegayaa inuu durbadiiba bilaabay isku shaandheyn uu ku sameeynayo shaqaalaha ka howlgala xafiiskiisa kadib markii uu dhawaan xilka kala wareegay ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa xafiiskiisa agaasime uga magacaabay Maxamed Keynaan oo kasoo jeeda deegaanada Puntland islamarkaana hore u ahaa afhayeenkii guddiga doorashada dadban, waxaana xilka haatan loo magacaabay hore u haayay C/salaan Salwe oo isna kasoo jeeda deegaanada Puntland.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa agaasimaha maaliyadda ee xafiiskiisa u magacaabay nin ay saaxiibo dhaw yihiin oo lagu magacaabo Bashiir C/laahi, waxaana xilkaan hore u hayn jiray Mukhtaar Xuseen Weheliye, oo xil ka qaadis lagu sameeyay kahor intii aanu ra’iisul wasaare Kheyre xilka la wareegin.
Mas’uulka cusub ee loo magacaabay agaasimaha maaliyadda xafiiska ra’iisul wasaaraha Bashiir C/laahi ayaa hore xilkaasi usoo qabtay, waxaana suurto-gal ah in magacaabidiisa laga noqdo, maadaama magacaabistiisa ay durbadiiba laga keenay qeylo dhaan.
Illaa iyo haatan lama oga tallaabada xigta uu ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ku dhaqaaqi doonno, waxaana haatan la sheegayaa inuu waddo la tashiyo ku aadan waxa uu ka yeeli lahaa arrinkaan.